Faashadda & Cajaladaha Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha | Shiinaha Faashadda & Cajaladaha Warshad
Dharka La Kala Leexin Karo ...
Cajaladda 'Hoof casting' waa shay si gaar ah loo shubay oo loogu talagalay astaamo gaar ah oo loogu talagalay in lagu daboolo qoobabka fardaha. Kaba duwanaanshaha kabka orthopedic-ka ee cajaladda ridaya qoobabku waxay leedahay waxyaabo badan oo cusbi ah, taas oo u dhiganta iska caabbinta dharka.
Habka loo duubo ee Hoof habka duubista iyo walxaha substrate waxay taageertaa goobta uu ku fashilmay qoobabka iyo sidoo kale natiijada guul darrooyinka sida, cudurada khadka cad, dillaacyada, iyo cagaha khafiifka ah.
Faashadda jilicsan ee loo yaqaan 'Crepe elastic Bandage' waxay leedahay maqaar jilicsan, dabacsanaan sare iyo hawo wanaagsan oo hawo leh, taas oo hagaajin karta wareegga dhiigga isla markaana ka hortagi karta bararka xubnaha.
1. Waxyaabaha: 80% cudbi; 20% spandex
2. Miisaanka: g / ㎡: 60g, 65g, 75g, 80g, 85g, 90g, 105g
3. Clip: oo leh ama sifeexaaya boodhadh yar yar, iskoolada laastikada laastikada ama boodhadhka birta ah
4. Cabbirka: dhererka (fidsan): 4m, 4.5m, 5m
5. Baaxadda: 5m, 7.5m 10m, 15m, 20m
6. Xirxirida balaastigga: shaqsi ahaanba waxaa lagu duubay cellophane
7. Fiiro gaar ah: qeexitaan shaqsiyeed sida ugu macquulsan ee macaamilka codsigiisa
Faashadda laastikada tubular-ka waxay leeyihiin kala duwanaansho iyo ku-habboonaan wanaagsan. Waxaa loo isticmaali karaa qayb kasta oo ka mid ah jirka. Qaab dhismeedka shabakaddiisa gaarka ah iyo qaabkeeda hawlgalka, waxay aad ugu dhowaan kartaa jirka bukaanka.
• Isticmaal noocyo kala duwan: Faashadda polymer-ka plywood go'an, faashadda 'gypsum', faashadda caawiyaha, faashadda isku-xoqidda iyo kala-goynta plywood-ka si aad uhesho.
• Dareen jilicsan, raaxo leh, ku habboonaan. Cillad-xumo malahan kadib jeermiska heerkulka sare
Si fudud loo isticmaalo, nuugista, quruxda iyo hidde-wadaha, ma saamayso nolosha maalinlaha ah.
Suufka biyuhu waa sheygii ugu dambeeyay ee ay soo saartay shirkadeena, oo leh waxtarka sare ee biyuhu, dabacsanaan wanaagsan iyo maqaar raaxo leh.
Astaamaha: biyuhu, jilicsan, raaxo leh, kuleylka-kuleylka leh
Codsiga: lafaha, qalliinka
Sharaxaadda: Xakamaynta biyuhu waa shey gargaar u ah faashadda / dhejiska dhejiska si looga hortago in maqaarka bukaanku waxyeello u gaarto marka faashadda / faashadda ay adkaato
Suufka biyuhu waa mid lagu dhejiyo faashadda malaasyada si looga hortago inay waxyeello u geystaan ​​maqaarka bukaannada markay is adkeeyaan, waa mid aad u neefsan kara, laastik ah, jilicsan oo raaxo leh maqaarka.
Astaamaha: jilicsan, raaxo leh, kuleylka-kuleylka
Sharaxaadda: Xakamaynta biyuhu waa shey gargaar u ah faashadda / dhejiska dhejiska si looga hortago in maqaarka bukaanku waxyeello u gaarto marka faashadda / faashadda ay adkaato.
Faashadda isdhiska ah ee isdhaafka ah waxaa badanaa loo isticmaalaa isku xirnaanta iyo hagaajinta dibedda. Intaas waxaa sii dheer, waxaa sidoo kale isticmaali kara dadka isboortiga oo badanaa jimicsi sameeya. Shayga waxaa lagu duubi karaa curcurka, canqowga iyo meelo kale, kuwaas oo ka ciyaari kara door difaac gaar ah.
• Waxay khusaysay hagaajinta iyo duubista daaweynta;
• Waxaa loo diyaariyay xirmada gargaarka shilka iyo dhaawaca dagaalka;
• Loo adeegsaday in lagu ilaaliyo tababarada kala duwan, ciyaarta, iyo isboortiga;
• Hawlgallada goobta, ilaalinta badbaadada shaqada;
• Badbaadinta iyo samatabbixinta caafimaadka qoyska;
• Duubista caafimaadka xoolaha iyo ilaalinta cayaaraha xoolaha;
• Qurxinta: lahaanshaha si ku habboon u isticmaalkeeda, iyo midabbo dhalaalaya, waxay u isticmaali kartaa qurxin caddaalad ah.
Faashadda Mashiinka waxa lagu sameeyaa faashadda faashadda ee kor u kacaysa, ku dar malaas budada Paris ah si loo sameeyo, ka dib markii la qooyo biyo, way sii adkaan kartaa muddo gaaban oo lagu dhammaystirayo naqshadeynta, waxay leeyihiin karti qaab aad u xoog badan, xasilloonida ayaa wanaagsan. Waxaa loo isticmaalaa hagaajinta qalliinka orthopedic ama orthopedic, samaynta wasakhahaasi, qalabka kaabayaasha ee addimada macmalka ah, stents ka difaacaya gubashada, iwm, qiime jaban.